कोरोना उपचारमा ख’टेकी नर्स , भि’त्री व’स्त्र मात्र लगाएर पुरुष वार्डमा गएपछी यस्तो सम्म भयो ! – Life Nepali
कोरोना उपचारमा ख’टेकी नर्स , भि’त्री व’स्त्र मात्र लगाएर पुरुष वार्डमा गएपछी यस्तो सम्म भयो !
कोरोना भाइरस ‘कोभिड १९’ को उपचारमा ख’टेकी रुसकी एक नर्स भि’त्री पोशाकमै पुरुष वार्डमा पुगेपछि यो विषय भाइरल बनेको छ।सार्वजनिक भएको फोटोमा उनले भित्री पोशाक र पारदर्शी पीपीई लगाएकी छन्। २० वर्षकी नर्स टुला शहरको एक अस्पतालको पुरष वार्डमा खटेकी थिइन्। उक्त वार्डमा पुरुष कोरोना संक्रमितहरु उपचाररत छन्। अस्पतालमा काम गर्ने नर्सले पारदर्शी सुरक्षा कवचभित्र बि’किनी मात्र लगाएर उपचारमा खटिएपछि त्यसको व्यापक चर्चा भएको छ । ती महिला नर्सलाई प्लास्टिकको सुरक्षा कवच लगाएको अनि औषधि भरिएको ट्रे बोकेको अवस्थामा तस्वीर लिइएको थियो ।
तुलाको सरुवा रो’ग अस्पतालमा यो तस्वीर लिइएको हो । रोगीहरूले नर्सको यस्तो उ-त्तेजक वस्त्रमा आ’पत्ति त जनाएनन् तर उनलाई घुरेर हेर्न भने छुटाएनन्, तस्वीर प्रकाशन गर्ने टस्ल्की नोभोस्तीले लेख्यो । तर नर्स आफैंलाई यो सुरक्षा कवच यतिसम्म पारदर्शी होला भन्ने नलागेको बताइएको छ । उनले दिनभरि भारीभरकम पीपीई लगाउँदा गर्मी भएर भित्री वस्त्र बाहेक अन्य लुगा फुकालेकी थिइन् । यो समाचार प्रकाशित भएपछि स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूको ध्यान खिचिएको छ । क्षेत्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले नर्सलाई चे’तावनी दिँदै उनले निर्देशिकाहरूको उ’ल्लंघन गरेको बतायो ।
Previous आ’पत्तिज’नक अवस्थामा कैलालीकी युवती र बैतडीका युवक कञ्चनपुरमा प’क्राउ
Next चो’री गर्नका लागि गएको चो’र घरभित्रै निदाएपछि ,